Farqiga u dhexeeya qorrax-dhaca iyo kuleylka kuleylka, sida aan isaga difaaci lahayn iyaga | Saadaasha Shabakadda
Maalmo maanta oo kale ah oo aan la soo toosno bulshooyin badan oo ismaamula oo leh digniino ku saabsan heerkulka sare, waa marka jidhkeennu ugu nugul yahay kulaylka. Waxaa jira talooyin badan iyo talo si loo yareeyo waxyeelada ay leedahay. Isdaaji, iskama dhigin saacadaha dhexe jimicsiga ama shaqada, iwm.
Runtu waxay tahay kuleylka, in kasta oo si toos ah, uusan had iyo jeer u samayn si isku mid ah, ma aha hal dhinac. Sababtaas awgeed, waxaan arki doonnaa waxa u dhexeeya istaroogga kulaylka iyo kulaylka. Labadoodaba waa xanuuno daran oo khatar ah taas oo nidaamka habeynta kuleylka ee jirka uusan shaqeynin.
1 Kuleylka kuleylka
3 Sababaha istaroogga kuleylka ama istaroogga kuleylka
4 Sababaha halista
Cudurka kuleylku wuxuu dhacaa marka jirku heerkulkiisu sarreeyo muddo dheer. Waxa ku dhacaya kiiskan ayaa ah in jirku uusan awoodin inuu si fiican u lumiyo kuleylka, isla markaana uusan awoodin inuu soo celiyo heerkulkiisii ​​caadiga ahaa. Daalka kuleylka waa cilad khafiif ah waxaana la socon kara kuleylka oo ku haya. Tusaale ahaan, murqo xanuun kadis ah oo ku dhaca gacmaha ama lugaha iyo marmar caloosha.
Inaad awoodid inaad kahadasho istaroogga kulaylka, qofka heerkulkiisu waa inuu ahaadaa 40ºC ama in ka badan kuleylka deegaanka oo daciif ah ama xaaladaha ugu xun, kuleylka aan jirin. Waxaa muhiim ah in aan lagu khaldin qandho, maxaa yeelay xilligan ma aha jirka oo kor u qaadaya heerkulkiisa si uu ula dagaallamo infekshinka. Si fudud uma soo dejisan kartid.
Heatstroke ama qorraxda, taas oo si fudud loogu jahwareeriyo istaroogga kuleylka, Waxay ka timaaddaa soo-gaadhista qorraxda ee muddada dheer. Waxaa kahoreyn kara istaroogga kuleylka, kaasoo sababa luminta badan ee dareerayaasha iyo cusbada macdanta ee dhididka. Tani waxay ku keentaa daciifnimo xoog leh jirka. Tani waa marka kuleylka kuleylka uu isu beddelo istaroog kuleyl ah, marka jirku uusan awoodin inuu sii wado heer-kulka caadiga ah.
Sababaha istaroogga kuleylka ama istaroogga kuleylka
Soo-gaadhis dheer oo jawiga heerkulka sare leh. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa istaroogga kuleylka ee caadiga ah, oo aan ku kicin dadaal jireed. Heerkulka joogtada ah ee joogtada ah oo ay weheliso deegaanno qoyan, ayaa doorbida inay dhacdo. Waxay sidoo kale badanaa dhacdaa waqti dheer, laga bilaabo laba ama saddex maalmood.
Firfircoonida iyo dhaqdhaqaaqa jirka ee heerkulka sare. Jawiga diirran, halkaasoo jimicsi ama shaqo lagu dhaqmo, waa marka aan leenahay cilladda noocan ah maxaa yeelay waxaan ku qasbeynaa jirka in badan. Intaas waxaa sii dheer, haddii dadku aysan u baran heerkulka sare, waxay u badan tahay inay la kulmaan waxyeellooyinkiisa.
Sababo kale oo badan ayaa sidoo kale lagu xisaabtami karaa. A dhar aan neef lahayn taasi waxay ka hortageysaa uumiga dhididka si jirku u qaboobo. Isaga isticmaalka cabitaanka khamriga taas oo saameyn ku yeelata kuleylka kuleylka jirka ee ka hortagaya inuu si sax ah u shaqeeyo. IYO fuuqbax, Aanad sifiican ugu qoyanin dheecaanka dhidid awgiis. Qof walba guud ahaan, laakiin gaar ahaan ciyaartooyda, barta fuuq-celinta ayaa muhiimad weyn u leh. Markaad lumiso dareerayaasha si aad u dhakhso badan, waxaa muhiim ah inaad cabto kahor intaadan harraad dareemin, waana tan ilaa inta jirku kaqaadayo dheecaanka, waxaa jira waqti go'an oo laga fiirsado.
In kasta oo ay tahay wax dhici kara da 'kasta, carruurta, carruurta iyo waayeelka ayaa ugu nugul. Ka yar 4 sano ama ka weyn 65 sano badiyaa waxay qaataan waqti dheer si ay ula qabsadaan heerkulka.
Ciyaartooyda cayaarta isboortiga inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysantas, sida orodka ama baaskiil wadista. Xaaladahan oo kale, si looga hortago inay dhacdo, sidaan ka faallaynay, fuuq baxa ayaa aad muhiim u ah.
Waqtiyada dheer ee heerkulka sare, qaboojiye la'aan. Soo-gaadhis lama filaan ah oo qorraxda la mid ah markaynu xeebta aadno.
Cudurada daba-dheeraada, sida sambabada, wadnaha ama buurnida, qaab nololeedka ama dhibbane u ahaa istaroog hore, tirooyinka dadka la silcaya ayaa kordha.
Iyo in la dhammeeyo, waa muhiim in la muujiyo daroogada qaarkoodWaa muhiim inaad aragto buugyarahan ama aad weydiiso farmasiilaha. Waxaa jira qaar sababa ciriiriga xididdada dhiigga. Kuwa xakameynaya cadaadiska dhiigga adoo xiraya adrenaline. Diuretics-ka soo daaya soodhiyamka iyo biyaha jirka. Iyo qaar yareeya astaamaha dhimirka, sida dawooyinka murugada ama dawooyinka maskaxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Farqiga u dhexeeya Sunstroke iyo Heat Stroke, sida aan isaga difaaci karno iyaga